2012 juin 13 | Ministère de la Culture et du Patrimoine
Eo amin’ny dingan’ny fitsarana ireo tononkalo voaray ankehitriny, ny Ministeran’ny Kolontsaina sy ny Vakoka izay fifaninanana nampanaovina manerana an’i Madagasikara nenti-nanamarika ny andro eran-tany ho an’ny poezia, 21 Marsa 2012.
Bri Mamika ao amin’ ny CGM.
Bri Mamika, dia mpanakanto Malagasy iray mipetraka any Italy. Tonga eto an-tanindrazana nitondra « voandalana » ho an’ny mpankafy azy izy, etsy amin’ny CGM Analakely, ny zoma ho avy izao manomboka amin’ny 7ora hariva.
Eo am-panomanana ny rakikira faha efatra i Fanja Andrimanantena. Nambarany fa moramora ho azy ny mamorona sy mizara ho an’ny hafa toy izay ho an’ ny tenany ny sangan’ asany. Ny jazz izay nahafantarana azy hatrizay no mbola andravahany ity rakikira vaovao ity.
Ady amin’ ny Piraty.
Ao anatin’ ny fanentanana ny borigady manokana.
Ho fantatra amin’ ny volana aogositra ny fepetra sy dingana hatao amin’ ireo kapila vokatry ny asa famoronana ara-javakanto tsy misy hologramme, vita talohan’ ny 2011.